Sawirro-Soodhoweyntii Farmaajo ee Qaahira iyo Kulankii Madaxweynaha Masar.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, halkaas oo ay uga bilaabatay booqasho rasmi ah oo labo maalmood ah.
Labada Madaxweyne oo kulan gaar ah yeeshay ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee dhinacyada waxbarashada, dhaqaalaha iyo socdaalka.
Ajandayaasha kale ee Madaxweyne Farmaajo iyo Al Sisi ay ka wada hadleen waxaa kamid ahaa in Egypt Air ay duullimaadyo toos ah ka bilowdo Muqdisho iyo Qaahira, in dal ku-galka Masar loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku safraya baasaaboorka shaqaalaha iyo diblomaasiga, in dowladda Masar ay ka hirgaliso Soomaaliya xarun lagu tababaro diblomaasiyiinta iyo in la kordhiyo deeqaha waxbarasho ee dowladda Masar ay siiso Soomaaliya.
Labada Madaxweyne ayaa isku afgartay dhammaan qodobadii ay kawada hadleen.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa barri kulamo la qaadan doona Sheekha Al-Azhar Dr.Axmed Al-Dayib iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar.